Isikhungo saseMadrid: Puerta del Sol, Tirso de Molina - I-Airbnb
Isikhungo saseMadrid: Puerta del Sol, Tirso de Molina
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-4 Bears
U-4 Bears Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elimaphakathi neMadrid, imizuzu emi-5 ukuhamba ukusuka ePuerta del Sol.
Igumbi eliphindwe kabili eline-balcony yangasese kanye nemibono emangalisayo yomunye wemigwaqo eyiqiniso kakhulu yedolobha. Leli fulethi libuye libe ne-patio ethokomele. Igumbi lilungele izithandani. Iphinde ibale ngombhede usofa.
Kukhona ithuba lokuqasha amanye amagumbi efulethini.
Leli fulethi linamagumbi okulala amahlanu, amagumbi okugeza amathathu, igumbi lokuphumula, ikhishi elihlome ngokuphelele, indawo yokuwasha kanye nevulandi elihle.
Futhi wonke amagumbi afakwe ilokha kagesi ukuze siqinisekise ukuphepha kwezivakashi zethu.
4.62 out of 5 stars from 333 reviews
4.62 · 333 okushiwo abanye
Emgwaqweni wethu hlangana izindawo ezimbili ezindala neziyaziwa kakhulu eMadrid: iLa Latina neLavapiés. Bobabili baqashelwa phakathi kwabantu bendawo njengamasiko ahlukahlukene, ajabule futhi agcwele impilo. Ungathola njalo indawo yokuphuza ubhiya noma ujabulele ama-tapas ajwayelekile. Ngaphezu kwalokho, i-Plaza Mayor kanye ne-Puerta del Sol bahamba imizuzu emi-5 ukusuka efulethini.
Ibungazwe ngu-4 Bears
Sizotholakala ngokugcwele ukuze sikuncomele izindawo nezinhlelo zokukusiza ukuthi ube nomuzwa ongcono kakhulu ongakhona.
U4 Bears Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: VT-7949